Madaxweyne Xasan Sheekh oo khudbadiisa maanta kaga hadlay arrimo dhowr oo xasaasi ah (DAAWO VIDEO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo khudbadiisa maanta kaga hadlay arrimo dhowr oo xasaasi ah (DAAWO VIDEO)
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka qeyb-galay munaasabad lagu caleemo saarayay madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa oo lagu qabtay magaalada Jowhar ayaa ka hadlay arrimo badan oo aad u xasaasi ah.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa marka hore ka hadlay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dadaal xoogan ugu jirto sidii loo qancin lahaa, islamarkaana loo xalin lahaa wax kasta oo tabasho ah oo ay qabaan bulshadda kasoo jeeda waqooyi galbeed Soomaaliya, si loo helo midnimada umadda Soomaaliyeed.
“Waxaa la yahay walaalo, dowladda Soomaaliya waxay dadaal ugu jirtaa waxkasto oo tabasho ah oo qabaan walaalaheena waqooyi galbeed Soomaaliya ku nool, wax walbo oo la isku soo dhawaan karo ayaa lagu dadaalayaa in la sameeyo” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bogaadiyay madaxda maamulka cusub ee Hirshabeele, isagoona ku bogaadiyay in dhabar adeeg ay u muujiyeen sidii loo dhisi lahaa maamulkaas, isagoona sidoo kale madaxdaasi ku booriyey inay dhegeystaan, islamarkaana tix-geliyaan tabashadda ay qabaan qaar ka mid ah walaalaha ku mideysan maamulkaasi.
Wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh si gaar ah uga shanqariyay socdaalkii uu madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ku tagay magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isagoona talaabadaasi ku tilmamay mid mudan dhiiri-gelin iyo in la sii wado la-tashiyadda lagu qancinayo dadka tabashadda qaba.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u mahad celiyey dhamaan mas’uuliyiinta, odayaasha dhaqanka, xildhibaanada, siyaasiyiinta iyo ururadda bulshadda ee u dhabar adeegay in la dhiso maamulka Hirshabeele oo ay ku mideysan yihiin gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.